Antsan-tononkalo : hanolotra ny « Anjankira » ny Sandratra | NewsMada
Antsan-tononkalo : hanolotra ny « Anjankira » ny Sandratra
Par Taratra sur 21/06/2018
Mitohy hatrany ny fampivelarana sy fampahafantarana ny asan’ny mpanoratra ao anatin’ny Faribolana Sandratra. Poeta 4 mirahalahy indray no hanatanteraka ny « Anjankira »…
Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny « Iray volan’ny teny malagasy », hanatanteraka antsan-tononkalo ny poeta efatra mirahalahy ahitana an’i Narilala, i Zo Sitrakiniavo, i Rojo Fanahy, ary i Andriniela avy ao amin’ny Faribolana Sandratra. Seho miavaka, tontosaina etsy amin’ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) tohatohabaton’Antaninarenina, ny 23 jona izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Antsan-tononkalo nampitondrain’izy ireo ny lohateny hoe « Anjankira ».
Raha ny fanazavan’i Narilala avy amin’ny teny roa « anja » sy « hira » ny niteraka ny « Anjankira ». Ny « Anja », ilazana ny hatsarana miafina ao anaty poezia. Ny « hira » indray ilazana ireo firindran-teny voakaly narahim-peo miavaka maha poezia ny poezia. “Izany hoe, seho entina hilazana ireo hatsarana maha poezia izay voizina eny an-tsehatra ny “Anjankira” “, hoy hatrany i Narilala.
Nambarany fa haseho ao ny poezia amin’ny endriny rehetra, toy ny fitiavan-tanindrazana, ny fitiavan’olon-droa, ny raharaham-pirenena ankehitriny sns…. Nomarihin’ireto poeta ireto fa ankoatra ny antsan-tononkalo, voarakitra anaty boky manana pejy 120 ihany koa ny “Anjankira”. Hisy boky azo jifain’ny mpanatrika rahateo eny an-toerana amin’io fotoana io. Tahaka ny nahazatra ny Faribolana Sandratra hatramin’izay, tsy hisy ny vidim-pidirana fa afaka manatrika ity fiantsana tononkalo ity avokoa izay rehetra liana amin’izany.